HOOYADA SOOMAALIYEED IYO WAAYIHII REER GUURAAGA. | Baligubadlemedia.com
HOOYADA SOOMAALIYEED IYO WAAYIHII REER GUURAAGA.
Kalintii ay hooyadu ku la hayd noloshii reer guuraaga iyo dhibaatooyinkii is huwanaa ee ay ka dhaxashay. Waa qormooyin ka kooban dhowr qaybood, oo aan doonayo in aan idinla wadaago.
Soomaalidu waxay ku abtirsataa nolosha reer guuraaga taa soo la odhan karo waxay ku sinayd bilawgii iyo aas aaskii taariikhda soomaalidu ka unkantay Geeskan Africa. Nolosha reer guuraagu waa nolol dhib iyo rafaad badan oo aan nasasho lahayn, waxaana lagaga gudbaa samir iyo adkaysi badan oo joogto ah.
Hadaba waxaan qormooyin kooban ku iftiimin doonaa duruuftii iyo waayihii qadhaadhaa ee hooyooyinka Soomaaliyeed kala kulmeen noloshii reer guuraga, taa soo ay bulshada Soomaalidu wakhti badan ku soo qaateen sidii ay salka ugu dhigi-lahaayeen nolol ka islaaxda dhulka kaymaha ah ee ay mudada dheer ku noolaayeen. Waxa kaloo iyana xusuusteeda leh sidii ay hooyooyinkii Soomaaliyeed ugu dulqaateen diiftii iyo daranyada taalay noloshii reer guuraaga.
Sababta maanta igu kaliftay in aan dib u milicsado taariikh iyo waayo in tooda badan laga soo gudbay waa isbadalka nolosha Soomaalidu samaysay sanadihii ugu dabeeyay, gaar ahaan kala fogaanta nololeed ee u dhaxaysa hooyada maanta iyo hooyada shalay.
Waxa biyo kama dhibcaana in ay jirto farqi aad weyn oo u dhaxaysa hooyadii la kaca-kufaysay noloshii baadiyaha iyo hooyada la kowsatay nolosha magaalooyinka, marka loo eego xaaladaha dhaqan-dhaqaale ee mid waliba nasiibka u heshay. Waxa kaloo iyana haboon in haweenka maantu ay dib u fiiriyaan marxaladihii adkaa ee hooyooyinka Soomaaliyeed u soo samreen, xiliyo ay Soomaalidu ka durugsanaayeen dhulkii magaalooyinka ka agdhawaa, islamarkaana aanay jirin adeegyo bulsho oo ay haweenka maanta ku naaloonayaan. Sooyaalka taariikhda oo dib loo raadguraa waxay bidhaamisaa jahada loo socdo iyo geediga la guurayaa inta uu leegyahay. Hadaba in haweenka maantu dib u jaleecaan waayihii ay soomareen hooyooyinkii hore waxay ka caawinaysa in ay helaan halbeeg saxa oo ay ku cabiraan guulaha ay ka gaadheen halgankooda raadin xuquuqda haweenka.
Hooyooyinkii ka soo dabaashay noloshii adkayd ee reer guuraaga waxa lagu tilmaami karaa in ay ahaayeen naftood huryaal u soo jilib dhigay xaalado cakiran oo yaalay dhulkii qarfaha ahaa ee ay ku noolaayeen.
Wakhtigii iyo waayihii qalafsanaa ee Hooyooyinka Soomaaliyeed ku haystay noloshii baadiyuhu maaha kuwo aan halkan si waafiya idiinku soo gudbin karo. Waxaan’se qalinka u qaatay in aan wax yar ka iftiimiyo xaaladihii ugu adkaa ee hooyooyinka Soomaaliyeed u soo beerdhigeen xiliyo ay noloshu baxaadagaysay. Waxaan haddii Alle idmo, si guudmar ah wax uga tilmaami doonaa, 5) caqabadood oo hooyooyinka Soomaaliyeed ku haystay noloshii baadiyaha, ku waa soo kala ahaa; 1) dhibtii hooyooyinka ka soo gaadhay markii ay waayeen adeegyo caafimaad oo lagu daryeelo, 2) howshii aan dhamaadka lahayn ee ay kala kulmeen hirgalinta aqalka Soomaaliga, 3)daalkii iyo diiftii ay ka dhaxli-jireen marka ay reeruhu guurayaan, 4) tacadii iyo turun-turooyinkii ay kala kulmeen aaboyaashii ay nolosha la wadaagayeen, 5) ta ugu danbaysa oo ah sidii hooyooyinka looga dayriyay taladii qoysaskooda.
1) La’aanta adeego caafimaad; Marka ay hooyadu uurka leedahay ama ay nuujinayso waxay aad ugu nugushahay in ay asiibaan Xanuuno khatar ku ah nafteeda, taa soo ay ugu wacan tahay, xaalado u gooniya markay hooyadu dhalayda tahay.
Xiliyadii ay dadku reer guuraaga ahaayeen may-jirin adeegyo caafimaad oo lagu daryeelo dadka kuwa ugu jilicsan sida Hooyada uurka leh, Caruurta 5sano ka yar iyo dadka waayeelka ee xoogoodu yaraaday.
Dhibaatooyinkii ku habsaday Hooyooyinkii reer guuraaga ahaa waxa ugu xanuun badnaa, kuwii la soo darsi-jirey marka ay hooyadu foolanayso, taa soo haddii uu Ilmuhu isgudbo ama uu hoosba u soo dagi waayo, ama ay hooyada miskeheedu yar-yihiin, midna wax lagula tacaalo aan loo heli-jiren, waxa qudha ee la sugi-jireen waxay ahayd inta ay hooyada naftu ka baxayso, hadaan Ilaahay SWT faraj u bixinin. Sidoo kale haddii hooyada uurka leh ay ku dhacdo dhiigyaraani ama dhiigkar iyana wax lagu daweeyo looma heli-jirin. Waxa kaloo ka sii darraa haddii hooyadu markay umulayso dhiigbax ku yimaado, amaba ay igfashan qaado iyana wax lagu dabiibo looma haynin.
Waxa intaa dheeraa hooyadu waxay ahayd Qofka koobaad ee ugu tacabka iyo dadaalka badnaa howlihii reer guuraaga, waxaana la odhan karaa howsha baadiyaha 70% waxa dhabarka u ridan jirtay hooyo somaliyeed oo aan daryeel haysan. La soco. By Cumar Axmed Cali; [email protected]/0634244802